Sidee Loo Diiwaan Geliyaa Gudbinta Twitter-ka? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 546
Isticmaalaha Twitter wuxuu fursad u haystaa inuu Diiwaan geliyo a Toos U Daawasho oo wata Qalabka ama Software; Sababtaas awgeed, waa inaad raacdaa nidaamkan: Marka hore, u gudub qaabeynta arjigaaga ama Qalabkaaga.
Mar uun codsigooda, Isticmaaluhu wuxuu ku sii wadaa nidaamka: Xulo Server gudbinta shaqsiyeed; ka xulo Twitter-ka xulashada kala-goynta si aad u xaqiijiso furahaas koontadaada Twitter.
Gal akoonkaaga Twitter-ka oo leh Magaca isticmaalaha iyo lambarka sirta ah ee Koontada aad rabto inaad u dirto Gudbinta oo aad aqbasho rukhsadaha. Marka xigta, waxay bilaabmaysaa inay ku gudbiso fiidiyowga shabakadda bulshada ee Twitter.
La wadaag Live Stream ama ku celceli barta Twitter-ka
para La wadaag durdur Live ama Replay on Twitter, Isticmaaluhu waa inuu raacaa tilmaamaha iyo nidaamyada laga heli karo barxadda Twitter-ka si loo fuliyo ficil la sheegay; Dareenkan, waa inay:
Guji astaanta Share ee ku taal shaashad buuxda Muuqaal Live ah ama Ciyaar ah; ka dib dooro mid ka mid ah xulashooyinkaas: Guji Live Share (markay Live tahay).
O La wadaag bilowga (markaad isticmaaleysid habka kucelcelinta); dhagsii La wadaag Tweet, dir dir Fariin Toos ah ama nuqul ka sameyso fiidiyowga Live ama Replay laga bilaabo daqiiqad uu isticmaalehu ku doorto barta xulashada.
KA HORTAG QOFKA IN UU EEGO OO FALANO KA GELIYO MUUQAALKAYGA OO KU NOOL TWITTER
Isticmaaluhu wuxuu leeyahay suurtagalnimada inuu Ka Hortago qof Eeg oo Faallo Muuqaalkaaga Toos ugu deg Twitter; mid ka mid ah dariiqyada ayaa ah in laga xannibo shaqsigaas inuu gebi ahaanba waxba ka qaban karin Video-gaaga Live.
Si loo xakameeyo qofka, Isticmaaluhu waa inuu: Guji Faalladaada, dooro Profile-kaaga, guji qalabka 'Gear', dooro isticmaalaha Block. Koontada qofka kale ma awoodi doonto inay la macaamisho Fiidiyowyadaada Tooska ah waxaana laga xannibi doonaa Twitter-ka.
Isticmaalaha sida daawade ahaan wuu awoodaa soo gudbi faallooyinka inaad u aragto mid gef iyo aflagaado ah. Si tan loo sameeyo, xulo faallada oo guji faallooyinka Warbixinta. Ficilkan, mar dambe ma daawan doontid farriimaha qofka kale inta hartay ee Live Stream.
Mawduucan Lama Oggolaan Fiidiyowyaasha Tooska ah
Shuruucda iyo siyaasadaha Twitter ayaa dejiya waxyaabaha ku jira looma oggola Fiidiyowyada Tooska ah, sida: Fiidiyowyo ay kujiraan rabshado garaaf ah, waxyaabaha qaangaarka ah ama sawirro nacayb ah oo xadgudub ku ah nabadda iyo ladnaanta Isticmaalayaasha iyo dadweynaha.
Muuqaal Kasta oo Toos ah oo la faafiyo ujeedkiisuna yahay kor u qaad cadaawada bini-aadamka dhexdiisa sababo jinsi, diin, naafonimo, nooca galmada, asalka asalka, dhalashada, iwm.
Twitter ayaa leh dulqaad la’aan eber oo leh fiidiyowyo toos ah ama daabacado kale oo soo bandhigaya nuxurka iyo sawirrada ku lug leh ku xadgudubka nooc kasta oo carruur ah, dhallinyarada iyo dhallinyarada; iyo xayawaano la jarjaray.
1 La wadaag Live Stream ama ku celceli barta Twitter-ka
2 KA HORTAG QOFKA IN UU EEGO OO FALANO KA GELIYO MUUQAALKAYGA OO KU NOOL TWITTER
3 Mawduucan Lama Oggolaan Fiidiyowyaasha Tooska ah